Emeputakwa site na nkerisi ohia | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Emeputakwa site na nkerisi ohia
Ikekwe otu n'ime ihe ndị kachasị mma ma dị egwu - ube "Nika"!
Ube - ezigbo okpomọkụ-omenala omenala. Ma ugbu a, e nwere ụdị dịgasị iche iche nwere ike ịmalite ọbụna na mpaghara kachasị oke. Kedu ụdị pears na-ezo aka? Pear "Nika" - oge oyi dịgasị iche iche na oke ntu oyi, ruo -38 ° C. Mkpụrụ ahụ nwere ikike ogologo nchekwa. Ọdịiche dị iche iche maka nzube ya zuru ụwa ọnụ.
Otu esi akụ na-eto eto tricyrtis n'ogige
Ụdị na-egbuke egbuke nke tricyrtis dị ka onye na-egbukepụ egbukepụ nke ụwa ifuru nke ogige ubi ubi na-ebute nchegbu banyere nkwụsị ya megide mmetụta ndị ọzọ na ọrịa. Ma ọ bụrụ na egwu egwu dị otú a abụghị n'efu maka nsogbu ndị metụtara na ịzụ ma na-eto eto ya, mgbe ahụ, ezigbo nkwụsị nke ọrịa nke orchid n'ubi abụghị ihe ịrụ ụka adịghị ya.
Kedu ka esi eto osisi oak osisi n'ubi
Salvia Dubravny, ma ọ bụ Salvia, bụ osisi shrub nke nwere ike ịbụ otu osisi kwa afọ. N'ebe ndị dịpụrụ adịpụ, a na-ahụkarị osisi osisi. A na-eji ụdị ndị ọrụ dị iche iche eme ihe na nhazi ihuenyo, mepụta ihe ndị dị ịtụnanya. Ọ na-ewu ewu na nkà mmụta ọgwụ na usoro nri.
Atụmatụ nke cultivation nke echinacea: kere ma na-elekọta perennial
Taa, Echinacea etolitewo maka ebumnuche nke ịchọ mma, na dịka osisi ọgwụ na Europe, North America, Caucasus na Russia. Na nkà mmụta omenala na omenala, ma jiri akwụkwọ osisi, na okooko osisi, na mgbọrọgwụ. Na-eto eto Echinacea site na seedlings E nweghị ihe isi ike na-eto eto Echinacea.
Aquadusia: akpaka microdrop ogbugba mmiri n'ubi usoro maka greenhouses
Otu esi etinye "Fitoverm", ihe na-arụsi ọrụ ike na usoro ọrụ nke ọgwụ
Ọgwụ ọgwụ na contraindications nke eucalyptus
N'iji quinoa: uru na nsogbu nke iji osisi
Kabul mara mma: njirimara nke dịgasị iche iche, kụrụ na nlekọta
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ na-ada ụra
Challoidal sulfur: ntụziaka maka ojiji
Spirulina alga: uru njirimara na contraindications